देउवालाई बधाई : थापा र शर्मालाई शुभकामना - Parichaya.com
देउवालाई बधाई : थापा र शर्मालाई शुभकामना
By परिचय	 On ३ पुष २०७८, शनिबार १२:५८ 0
नेपालमा प्रजातान्त्रिक संस्कार, नागरिकको मुक्ति र स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र समृद्धिको सवालमा जग र जरा बलियो भएको नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशनले परिवर्तन र रूपान्तरणको भरोसालाई फेरि एकपटक तरङ्गित गरेको छ । महाधिवेशनबाट नयाँ अनुहार मात्रै होइन युवाहरूको सचेत हस्तक्षेप र विद्रोहलाई गाउँगाउँबाट काठमाडौं पुगेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरेका छन् । सभापतिमा संस्थापनबाटै देउवा निर्वाचित भए पनि महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आगमनले राजनीतिमा आशाका उज्याला किरणहरू देखिएका छन् भने रूपान्तरणका लागि सम्भावनाको ढोका खोलिने सङ्केत देखिएको छ । गगनले ६५ र शर्माले ४२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा लोकप्रियता र चर्चा चुलिएको छ । पुरानो विरासत बोकेको पाटी नेपाली काँग्रेसमा चौथो पुस्ताका युवाको सशक्त उपस्थितिले आम मानिसलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिएको छ । स्थापना कालदेखि कै पार्टी भित्रको अन्तरघात, गुटउपगुट र कित्ता काटाकाटले मात्रै राजनीतिक भविष्य उज्यालो र फराकिलो हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको चेतना, चाहना, चयन गर्ने विवेकलाई बिर्को लगाउन गुट असफल भएको छ । यसपटक प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको योग्यता र क्षमतालाई स्वविवेक प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गरिदिएका छन् । विरासतको व्याज खाने परिपाटीलाई धज्जी उडाइ दिएका छन् । स्वनामधन्यहरूको हैषियत र ल्याकतलाई साइजमा ल्याइदिएका छन् । प्रतिनिधि कुनै तवला र गुटको दाना खाने दास होइनन् भन्ने कुरा अब काँग्रेसको नेतृत्वले शिक्षा लिनुपर्छ । आकाङ्क्षीको प्यानल नै बनाए पनि प्रतिनिधिले त्यसलाई खारेज गरिदिएका छन् । आन्तरिक सर्कुलेसन र षडयन्त्रलाई धुलो चटाइ दिएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको चेतना, चाहना, चयन गर्ने विवेकलाई बिर्को लगाउन गुट असफल भएको छ । यसपटक प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वको योग्यता र क्षमतालाई स्वविवेक प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गरिदिएका छन् । विरासतको व्याज खाने परिपाटीलाई धज्जी उडाइ दिएका छन् । स्वनामधन्यहरूको हैषियत र ल्याकतलाई साइजमा ल्याइदिएका छन् । प्रतिनिधि कुनै तवला र गुटको दाना खाने दास होइनन् भन्ने कुरा अब काँग्रेसको नेतृत्वले शिक्षा लिनुपर्छ । आकाङ्क्षीको प्यानल नै बनाए पनि प्रतिनिधिले त्यसलाई खारेज गरिदिएका छन् । आन्तरिक सर्कुलेसन र षडयन्त्रलाई धुलो चटाइ दिएका छन् । लामो समयको अस्थिरतालाई गतिशील बनाउने निकास दिएका छन् । काँग्रेसलाई कस्तो बनाउने ? कुन धारमा लैजाने ? धरातलीय तहमा रहेका काँग्रेसीजनमा कस्तो अक्सिजन प्रवाह गर्ने ? नीति र कार्यविधि कस्तो बनाउने ? भन्ने महत्वपूण सवालमा जरुर काम गरेर उत्तर प्रमाणित गर्नु पर्ने छ । जसले गर्दा मुलुकको समृद्धि र नागरिकको भाग्यमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्धत पुग्छ।
बलियो सुदृढ काँग्रेस बनाउन देउवाले स्वार्थसमूहको कोटरीबाट माथि उक्लनै पर्छ । पार्टीभित्रका अवयव र विभागलाई विस्तार गरेर कामको बाँडफाँड गर्न तदारुकता देखाउँदा र क्रियात्मक अभियानको रणनीति कार्यान्वयन भएमा देउवाको दोस्रो कार्यकाल स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । काँग्रसेका क्रेज बढाउनका लागि उनले युवा पुस्ताको प्राध्यापक बनेर प्रशिक्षक बन्नु पर्नेछ । भद्रगोलमा रमाउने उनको सनातन मनोविज्ञानको भञ्जीकरणका लागि थापा र शर्माले निरन्तर दववा सिर्जना गरिरहनुपर्ने छ ।
अनुभव भएका नेतालाई सम्मान र क्षमता भएका कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्दा काँग्रेसको रुख सिख्रो हुने छैन झन्झन्् हरियाली हुनेछ । बलियो सुदृढ काँग्रेस बनाउन देउवाले स्वार्थसमूहको कोटरीबाट माथि उक्लनै पर्छ । पार्टीभित्रका अवयव र विभागलाई विस्तार गरेर कामको बाँडफाँड गर्न तदारुकता देखाउँदा र क्रियात्मक अभियानको रणनीति कार्यान्वयन भएमा देउवाको दोस्रो कार्यकाल स्वर्ण अक्षरले लेखिने छ । काँग्रसेका क्रेज बढाउनका लागि उनले युवा पुस्ताको प्राध्यापक बनेर प्रशिक्षक बन्नु पर्नेछ । भद्रगोलमा रमाउने उनको सनातन मनोविज्ञानको भञ्जीकरणका लागि थापा र शर्माले निरन्तर दववा सिर्जना गरिरहनुपर्ने छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा वडा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहसम्म निर्वाचन हुनु लोकतान्त्रिक संस्कारको थालनी हो । बहुमतको दम्भ त्यागेर सबैलाईं समेट्नु देउवाको दायित्व हो । अंकगणितको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेका देउवाले लोकतन्त्रको पराजय नगराउन।
गगनको खाका र विश्वप्रकाशको योजनाले सार्थकता पाउँदा समाजवादको सपना पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । समाज विज्ञानको नियमले पनि यही भन्छ, ‘हरेक नयाँ मकैको बीऊले पूरानोलाई विस्थापित गर्छ’ । युवाहरूको सचेत हस्तक्षेपले काँग्रेसलाई फेरि तन्नेरी बनाउन सक्छ । त्यसका लागि घोषणा गरिएका वाचाहरू कार्यान्वयन गर्नु नै प्रमुख काम हो । उठान गरेका प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै अब्बल हुनु हो ।
गगनको खाका र विश्वप्रकाशको योजनाले सार्थकता पाउँदा समाजवादको सपना पूरा हुने सङ्केत देखिएको छ । समाज विज्ञानको नियमले पनि यही भन्छ, ‘हरेक नयाँ मकैको बीऊले पूरानोलाई विस्थापित गर्छ’ । युवाहरूको सचेत हस्तक्षेपले काँग्रेसलाई फेरि तन्नेरी बनाउन सक्छ । त्यसका लागि घोषणा गरिएका वाचाहरू कार्यान्वयन गर्नु नै प्रमुख काम हो । उठान गरेका प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै अब्बल हुनु हो । विधि, व्यवस्थापन र प्रणाली निर्माणमा काम नगरी उम्कन मिल्दैन । कार्यदिशा र कार्ययोजना सही ठहरियो भने नै सही नतिजा प्राप्त हुने हो । असल नीति र अब्बल नेतृत्वले नै काँग्रेसको पुनर्संरचना र परिवर्तन हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।
दलीय राजनीतिको सिंहावलोकन गर्दा स्पष्ट हुन्छ, गुटबन्दीले काँग्रेसलाई फितलो बनायो भने तुकबन्दीले एमालेलाई सडकमा पु¥यायो । प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा नेतृत्व स्वयम्ले अपमान भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सदासदा ख्याल गर्नुपर्छ । हिजोको कसिलो काँग्रेसमा ३६ जनाको कित्ताकाट हुँदा र पार्टी फुट्दा राजनीतिक नोक्सान काँग्रेसलाई मात्रै भएन नागरिक र मुलुकलाई घाटा लाग्यो । राजनीतिक नदीमा बगेको ढलनललाई सफा र सङ्लो बनाउने दायित्व युवाको काँधमा आएको छ ।
दलीय राजनीतिको सिंहावलोकन गर्दा स्पष्ट हुन्छ, गुटबन्दीले काँग्रेसलाई फितलो बनायो भने तुकबन्दीले एमालेलाई सडकमा पु¥यायो । प्राप्त जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा नेतृत्व स्वयम्ले अपमान भोग्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई सदासदा ख्याल गर्नुपर्छ । हिजोको कसिलो काँग्रेसमा ३६ जनाको कित्ताकाट हुँदा र पार्टी फुट्दा राजनीतिक नोक्सान काँग्रेसलाई मात्रै भएन नागरिक र मुलुकलाई घाटा लाग्यो । राजनीतिक नदीमा बगेको ढलनललाई सफा र सङ्लो बनाउने दायित्व युवाको काँधमा आएको छ । समयले मौका दिन्छ, त्यसको उचित सदुपयोग गर्नु नै नेतृत्वमा रहेका युवाको कर्तव्य हो । आर्थिक सामाजिक मुद्धाको सम्बोधन र समाधान गर्ने काम अन्तत्वगोत्वा राजनीतिक दलको नै हो । गम्भीर र गहन चुनौतीका अगाडि महान् सम्भावना छन् भन्ने विचारलाई मनन गर्न नेतृत्व चुक्नु हुँदैन् । नेपाली काँग्रेस स्मार्ट बनोस् र स्मार्ट काम गरोस् भन्ने जनअपेक्षालाई सम्मान गर्नु नै भलो हुने छ । रहर लाग्दो, आशा लाग्दो भरोस लाग्दो काँग्रेस बनोस् दोस्रो कार्यकालका लागि देउवालाई बधाई, गगन र विश्वप्रकाशलाई शुभकामना।
ज्योति माविमा राष्ट्रिय चित्रकला कार्यशाला हुने
संवैधानिक अधिकार खोसेर लिनुपर्छ : उपसभामुख शर्मा